Ny firongatry ny Factory Wholesale Down Suspension Ball- Z12050
NAHOANA NO MAHATONGA NY FAMPIANARANA BOLA? Tahaka ny fiarahan'ny valan'olombelona, ​​ny tonon-taolana dia toy ny teboka lehibe. Izy ireo dia singa iray tsy mampitohy izay mampifandray ireo rohy samihafa eo anelanelan'ny fampiatoanao sy ny chassis anao. Toy ny kodiarana amin'ny fiaranao no miakatra sy midina ireo amponga mihantona amin'ny alàlan'ny tonon-taolana. Avelany hifindra irery ny fampiatoana nefa tsy manelingelina ny fihetsiky ny kodiarana. Ity hetsika mahaleo tena ity dia manasaraka ny hetsiky ny kodiarana amin'ny chassis, mamorona fitsangatsanganana milamina sy mangina. Misy efatra ...
Inona no ataon'ny tonon-taolana? Ny fitambaran'ny baolina dia singa iray amin'ny fampiatoana eo alohan'ny fiara. Ny fampiatoana eo anoloana dia fivorian'ny rohy, tonon-taolana, kirihitrala ary fitotoana izay mamela ny kodiaranao eo aloha hihetsika ambony sy midina ary miodina miankavia na miankavanana. Mandritra ny fihetsiky ny fampiatoana dia manatsara ny fifandraisan'ny kodiarana amin'ny arabe ho an'ny fifehezana fiara tsara indrindra sy fitafiana kodiarana. Ny fitambaran'ny baolina no singa manakiana ny fampiatoana eo aloha izay mampifandray rohy maro sy ...
Fiatoana fiara mifehy ny fampiatoana fiara mifono fiatoana Ball Joint-Z12056
Mila mikambana baolina vaovao? Ny kitron-baolina dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandidiana azo antoka ny familiana sy ny fampiatoana ny fiara. Ampifandraisin'izy ireo amin'ny sandrin'ny fifehezana ny knuckles mamily. Ny fitambaran-baolina dia baolina sy faladiany miovaova izay mamela ny fampiatoana mihetsika ary miaraka amin'izay dia mamela ny kodiarana mamily. Satria ny fiharoan'ny baolina dia afaka mihetsika amin'ny lalana roa samy hafa indray mandeha, ny fampiatoana dia mety koa. Ny fiara dia mety manana fivorian'ny baolina marobe arakaraka ny fampiatoana sy ...
Fiara mitambatra milina baolina kitra avo lenta ho an'ny NISSAN-Z12058
Fiatoana baolina ambany fampiatoana eo aloha ho an'ny NISSAN-Z12059
Bola avo lenta mitambatra fiara mitokana Oem- Z12061
Ny vatantsika dia voarindra amin'ny tonon-taolana maro. Ny tonon-taolana dia manampy antsika hihetsika amin'ny fomba mavitrika sy miovaova kokoa, ary io hetsika io dia manala ny vokany. Ny fitambaran'ny baolina dia toy ny fiatoan'ny fampiatoana fiara. Mifandraisa eo anelanelan'ny sandry sy ny knuckle. Fa maninona no baolina? Mba hifehezana ny fiara dia takiana fa ny kodia eo aloha dia azo soloina amin'ny làlana irina. Ny mekanika familiana dia ampiasaina hanodinana tsara ny kodiarana, ary fitaterana baolina ampiasaina hampifandraisana ilay cam rotary amin'ny lever. Manatevin-daharana ny fampiasana ny baolina ...
Ambongadiny fiara fampiatoana fiara baolina Joint-Z12065
English Type Axle Suspension Front Ankavia Mahitsy Ball Joint-Z12066
Hood Shock Absorber, Knuckle familiana eo aloha, Shock Absorber fingotra, Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint, Shock Absorber Bolt,